Cover Orange 3.0.46 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.46 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Cover Orange
Cover Orange ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Google Play ပေါ်တွင်ယခု hit! ပါတီ Join! :)
Now! သငျသညျ '' လိမ္မော်ရောင် '' သူကနိုင်သလား?
အက်ဆစ်မိုးရွာရွာကနေလိမ္မော်သီးကိုကာကွယ်ဖို့လိမ့်မည်ဟုအတားအဆီးတွေကိုဖန်တီးရန်သင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအမျိုးမျိုးသောတ္ထုဆွဲယူပါ။ အမြင့်ဆုံးလူဦးရေ၏ရှင်သန်မှုနှုန်းကအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ကိုသုံးပါ။ ဗီတာမင် '' C'ollat​​eral ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
အသေးစား, လိမ္မော်ရောင်, လုံးယောက်ျားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ undying ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေအသံတွေရူ့ Adoring ။
အဖုံးလိမ္မော်ရောင်အားလုံးအသက်အရွယ်များအတွက်သင့်လျော်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင့်ဆင့်တည်မြဲ, လက်တွေ့ကျကျဂိမ်းရူပဗေဒပေါင်းစပ်တက်ကြွသောအရောင်အဆင်းနှင့်အသံကျယ် animations တွေကိုထွက်ရယ်မော။
** Press Review **
"Cover ကိုလိမ္မော်ရောင်: ဖြတ်ကြိုးကတည်းကအကောင်းဆုံးဂိမ်း?"
".. ချက်ချင်းအသုံးမပြုနိုင်လုံးလုံးစွဲလမ်းနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖျော်ဖြေမှု - ကိုယ့် Angry Birds ဂိမ်းနဲ့တူများနှင့်ကြိုးဖြတ်ပါ။ "
"။ Cover ကိုလိမ္မော်ရောင်ဟာ iPhone ဂိမ်းဖြစ်သင့်ရုံကားအဘယ်သို့: ။ ရိုးရှင်းပြီး touch screen တွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချွန်ထက်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူတစ်ပျော်စရာ concept ကိုသင်သင်၏နောက်ခရီးဆောင်စွဲရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ကသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်"
အားလုံးအိုကေပဲနောက်ထပ်တ level ကိုက "ခက်ခဲတဲ့လွထံမှလမ်းလျှောက်ဖို့အောင်, တစ်ဦးလိမ္မာပါးနပ် puzzler လာအောင်နှိုးဆွလိမ့်မည်ဟုဆွဲ" "ငါကကျိန်းသေခံစားရတယ်င့်"
"Cover ကိုလိမ္မော်ရောင်နဲ့ HD စီးသောဖန်တီးမှုဖျော်ရည်တယ်။ "
✓ Game ကန်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးကူညီမှု
✓ 160 Levels နဲ့ပါဝင်သည်
သန်း 500 ကျော်နှင့်အတူပြဇာတ်တစ်ဦးသည်စစ်မှန်သောအင်တာနက်ကိုထိခိုက်✓
အက်ဒွက် Tziselsky, ထိုရုပ်သံ-show ကို "တွေ့ကြုံ၏ကျေးရွာရှိ" များအတွက်တေးရေးဆရာများက✓ဂီတ
✓အသုံးပြုသူ-friendly ဖြစ်တဲ့ touch နဲ့ထိန်းချုပ်မှု
Cover Orange အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Cover Orange အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Cover Orange အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
vivo-api စတိုး 8.19k 7.86M
Cover Orange ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Cover Orange အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.0.46
ထုတ်လုပ်သူ FDG Entertainment GmbH & Co.KG
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.fdg-entertainment.com/en/privacy-policy.html
App Name: Cover Orange
Release date: 2019-09-11 18:20:49
လက်မှတ် SHA1: 27:DD:BA:65:E4:1C:6F:94:EB:4D:74:4C:ED:50:A8:CB:6E:15:CD:66
ထုတ်လုပ်သူ (CN): FDG Entertainment
အဖွဲ့အစည်း (O): FDG Entertainment
နယ်မြေ (L): Munich
Cover Orange APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ